မုန်တိုင်း: 1747.. ဖိုမ သဘာဝ အသိ ပညာပေး ( 45 )
1747.. ဖိုမ သဘာဝ အသိ ပညာပေး ( 45 )
ွှအရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး (2)
EC Methods Emergency contraceptives available in the United States include emergency contraception pills (ECPs) and the Copper T intrauterine device.1,2,3
Three types of ECPs are available in the United States: combined ECPs containing both estrogen and progestin (Yuzpe method), progestin-only ECPs (Table 1), and an ECP containing ulipristal acetate (UPA)
Emergency contraceptive pills အရေးပေါ်တားဆေး ဆိုတာ (၃) မျိုးရှိတယ်။ ၁။ Combined ECPs ထဲမှာ Estrogen နဲ့ Progestin တွေပါတယ်။ ၂။ Progestin တမျိုးထဲပါတယ်။ ၃။ Mifepristone ဒါမှမဟုတ် Ulipristal acetate ပါတဲ့ Antiprogestin ဆေးဖြစ်တယ်။
Combined ECPs contain the hormones estrogen and progestin. The specific agents that have been studied extensively in clinical trials of ECPs are the estrogen ethinyl estradiol and the progestin levonorgestrel or norgestrel. A specially packaged combined ECP (Preven®) was approved by the Food and Drug Administration (FDA) in 1998 but withdrawn from the market in 2004 based on data showing that progestin-only EC was more effective. Combining estrogen and progestin hormones in this manner is also called the Yuzpe method, after the Canadian physician who first described the regimen. Progestin-only ECPs have largely replaced the combined ECPs because they are more effective and cause fewer adverse effects. Although ECPs are commonly known as "morning-after pills," the term is misleading; ECPs may be initiated sooner than the name implies or much later than the morning after. Progestin-only ECPs are most effective when taken immediately after unprotected intercourse. Efficacy declines as time elapses between sex and drug administration. Progestin-only ECPs are approved by FDA for use up to 72 hours after intercourse. They are reasonably effective for up to 120 hours and perhaps longer.4 However, patients should remember that progestin-only ECPs are more effective the sooner they are taken after unprotected sex.5-8 While the effectiveness of progestin-only ECPs declines with delay in treatment, the effectiveness of the UPA ECP does not (up to 120 hours).
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ချက်ချင်းလဲ သောက်သင့်သလို ၇၂ နာရီကနေ ၁၂ဝ နာရီ အတွင်းမှာလဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။ • ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးကို အမေရိကားမှာ Yuzpe လို့ခေါ်တာ များတယ်။ အဲလို ဆေးမျိုး ဝယ်မရတဲ့ နေရာတွေမှာ အများဆုံးသုံးနေကြ ဟော်မုန်း ၂မျိုးတွဲ တားဆေးကိုလဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ တခါထဲ ၄-၅ ပြားသောက်ပြီး ၁၂ နာရီခြာရင် နောက်ထပ် ၄-၅ ပြားထပ်သောက်ရတယ်။ ၄-၅ ပြားဆိုတာ ဆေးအမျိုးအစား အပေါ်မူတည်တယ်။ • Progestin တမျိုးထဲဆေးမှာ Levonorgestrel ပါတယ်။ စပေါ်တုံးက 0.75 mg ပါတာကို ၇၂ နာရီအတွင်း သုံးခိုင်းတယ်။ နောက် ၁၂ နာရီအကြာမှာ 0.75 mg ထပ်သောက် ရတယ်။ • လေ့လာချက်အသစ်တွေအရ Levonorgestrel 1.5 mg ကို တခါထဲသောက်တာလဲ အတူတူ ထိရောက်တာ သိလာရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ မထူးဘူး။ အလွန်ဆုံး ခေါင်ကိုက်တာနဲ့ ရင်သားနာတာသာဖြစ်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးဈးကွက်မှာ Levonorgestrel 1.5 mg တလုံးထဲ နဲ့ Levonorgestrel 0.75 mg ၂လုံးတွဲဆိုပြီး ရောင်ချနေတယ်။ တလုံးစီကို ၁၂ နာရီ ခြာသောက်တာနဲ့ ၂ လုံးတခါထဲသောက်တာ အတူတူပါဘဲ။ • Mifepristone ဆေးကို ကိုယ်ဝန် ၃ လေအောက်ရှိတာကို ဖျက်ချဆေး Abortion pill အဖြစ်သုံးတယ်။ အရေးပေါ်တားဆေးအနေနဲ့လဲ သုံးတယ်။ ရာသီလာတာနောက်ကျနိုင်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာတော့ မဟုတ်ပါ။
ella® (one 30 mg tablet), approved by FDA August 13, 2010, marketed in Europe as ellaOne since October 2009. • အခုနောက်ပိုင်း Antiprogestin ဒုတိယမျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ Ulipristal acetate (30 mg single dose) ဆေးပေါ်လာတယ်။ Ella လို့ခေါ်တယ်။ The progestin-only products currently approved by FDA for use in the United States contain levonorgestrel. Two progestin-only products are currently available in the United States: Next Choice® (two 0.75-mg tablets), approved by FDA in June 2009, is the branded generic of its two-tablet predecessor, Plan B® (first approved by FDA in July 1999).
Plan B One-Step® (single 1.5-mg tablet), approved by FDA in July 2009.
The original treatment schedule was one 0.75-mg dose within 72 hours after unprotected intercourse andasecond 0.75-mg dose 12 hours later. The 72-hour marker is listed on the label for both of the currently marketed progestin-only ECPs. However, subsequent studies have shown thatasingle dose of 1.5 mg is as effective as two 0.75-mg doses 12 hours apart.5,6 A single 1.5-mg dose is now considered the evidence-based standard, and it can be effective up to 120 hours after unprotected intercourse. Also, this dosing regimen is easier for women and enhances adherence. Recently,asecond-generation anti-progestin, UPA, was FDA approved for use as EC in the US: ella® (one 30 mg tablet), approved by FDA August 13, 2010, marketed in Europe as ellaOne since October 2009.
A single 30 mg dose can be effective up to 120 hours after unprotected intercourse.
When ECPs specifically indicated for EC are not available, certain other oral contraceptives can be used in specified combinations for EC. The regimen is one dose followed byasecond dose 12 hours later, where each dose consists of up to six tablets depending on the brand. Currently, 19 brands of combined oral contraceptives are approved in the United States for use as EC (Table 1).
Table 1: Oral Contraceptives approved for EC in the United States 9
Levonorgestrel per Dose (mg)b
အရေးပေါ်တားဆေးများအမှတ်တံဆိပ် ကုမ္မဏီ အရေအတွက် စသည်တို့ အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသာ် Table 1: Oral Contraceptives approved for EC in the United States 9
Branda Manufacturer Pills per Dose Ethinyl Estradiol per Dose (mcg) Levonorgestrel per Dose (mg)b
Dedicated emergency contraception (take one dose)
Plan B One-StepTM Teva 1 white pill01.5 Next Choice® Watson2peach pills01.5 ella® Watson 1 white pill00c
Combined progestin and estrogen pills (take two does 12 hours apart) d
AvianeTM Teva5orange pills 100 0.50 CryselleTM Teva4white pills 120 0.60 EnpresseTM Teva4orange pills 120 0.50 JolessaTM Teva4pink pills 120 0.60 Lessina® Teva5pink pills 100 0.50 LevoraTM Watson4white pills 120 0.60 Lo/Ovral® Akrimax4white pills 120 0.60 LoSeasonique® Teva5orange pills 100 0.50 Low-Ogestrel® Watson4white pills 120 0.60 LuteraTM Watson5white pills 100 0.50 Lybrel® Wyeth6yellow pills 120 0.54 Nordette® Teva4light-orange pills 120 0.60 Ogestrel® Watcon2white pills 100 0.50 Portia® Teva4pink pills 120 0.60 Quasense® Watson4white pills 120 0.60 Seasonale® Teva4pink pills 120 0.60 Seasonique® Teva4light-blue-green pills 120 0.60 SronyxTM Watson5white pills 100 0.50 Trivora® Watson4pink pills 120 0.50 Notes:
a Plan B One-Step, Next Choice, and ella are the only dedicated products specifically marketed for emergency contraception in the United States. Aviane, Cryselle, Enpresse, Jolessa, Lessina, Levora, Lo/Ovral, LoSeasonique, Low-Ogestrel, Lutera, Lybrel, Nordette, Ogestrel, Portia, Quasense, Seasonale, Seasonique, Sronyx and Trivora have been declared safe and effective for use as ECPs by the United States Food and Drug Administration. Outside the United States, more than 100 emergency contraceptive products are specifically packaged, labeled, and marketed. Levonorgestrel-only ECPs are available either over-the-counter or fromapharmacist without having to seeaclinician in 60 countries. Plan B One-Step and Next Choice are available over-the counter to women and men aged 17 and older in the United States. A prescription is required for ella for women of all ages.
b The label for Plan B One-Step indicates to take the pill within 72 hours after unprotected intercourse. Research has shown that that all of the brands listed here are effective when used within 120 hours after unprotected sex. The label for Next Choice says to take one pill within 72 hours after unprotected intercourse and another pill 12 hours later. Research has shown that both pills can be taken at the same time with no decrease in efficacy or increase in side effects and that they are effective when used within 120 hours after unprotected sex. c 30 mg ulipristal acetate within 120 hours after unprotected sex.
d The progestin in Cryselle, Lo/Ovral, Low-Ogestrel and Ogestrel is norgestrel, which contains two isomers, only one of which (levonorgestrel) is bioactive; the amount of norgestrel in each tablet is twice the amount of levonorgestrel.
Copper T IUD Copper T IUDs can be inserted up to the time of implantation—six to 12 days after ovulation9—to prevent pregnancy. Because of the difficulty in determining the day of ovulation, however, many protocols allow insertion up to only five days after unprotected intercourse. The latest WHO guidelines allow IUDs to be inserted up to day 12 of the cycle with no restrictions and at any other time in the cycle if it is reasonably certain that she is not pregnant.10 A copper IUD can also be left in place to provide effective ongoing contraception for up to 12 years.
ဆေး ၃ မျိုးကို အရေးပေါ်တားဆေးအဖြစ်ပေးတာ ကိုယ်ဝန်ရလမ်းမှာ မကွာခြားလှတာ တွေ့ရတယ်။ ၁။ Levonorgestrel 0.75 mg ၂ ခါသောက် = ၁့၅%၊ ၂။ Levonorgestrel 1.5 mg တခါထဲသောက် = ၁့၈%၊ ၃။ Mifepristone 10 mg = ၂့ဝ%၊ အရေးပေါ်တားဆေးတွေအပြင် IUCD (IUD) သားအိမ်ထဲထည့်ရတဲ့ (ကော်ပါး) ပါ ပစ္စည်းကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။
ကော်ပါး ထည့်ထားပုံ • မ-မျိုးဥထွက်လာပြီးတဲ့နောက် သုက်ပိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး Implantation သားအိမ်-အတွင်းနံရံမှာလာပြီး တွယ်ကပ်ဘို့ စုစုပေါင်း ၆ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်အထိ ကြာတယ်။ • ဒါ့ကြောင့် ဒီကြားထဲမှာ Copper IUDs (ကောပါး) ပါတဲ့ သန္ဓေတားပစ္စည်းတခု သားအိမ်ထဲကို ထည့်ပေးထားရင် လာပြီး တွယ်ကပ်မှု မဖြစ်နိုင်တော့လို့ ကိုယ်ဝန်မရစေနိုင်ဘူး။ • အတိအကျပြောရရင် မ-မျိုးဥထွက်ပြီးနောက် ၅ ရက်အကြာမှာ ထည့်ထားနိုင်တယ်။ • တကယ်လို့ အကာကွယ် မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံတာဟာ မ-မျိုးဥမထွက်ခင် ၃ ရက်ကတည်းက ဖြစ်နေအုံးတော့ လိင်ဆက်ဆံအပြီး ၈ ရက်အကြားမှာ IUCD ထည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်မရစေနိုင်ဘူး။
• သတိထားဘို့က မ-မျိုးဥထွက်တဲ့ရက် သိဘို့လိုမယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အကာကွယ်မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံအပြီး ၅ ရက်အတွင်း IUCD ထည့်ရင် ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။
• နောက်ဆုံး WHO လမ်းညွှန်ချက်အရ ရာသီ ၁၂ ရက်နေ့ထည့်တာရတယ်။ ထည့်ထားပြီး ၁ဝ နှစ်အထိ ထားနိုင်တယ်။ • ဒါပေမဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက IUCD မသုံးသင့်ဘူး ရောဂါပြန့်စေမှာစိုးရတယ်။ Emergency Contraception အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေရဲ့ ထိရောက်မှု ဆန်းစစ်ချက် ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်္ဘာလထဲမှာ စာတမ်းတခု ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ (ပရင့်စ်တွန်) တက္ကသိုလ်က စီးပွါးရေး နဲ့ လူမှုရေးပညာ ပါမောက္ခ (ဂျိမ်းစ်-ထရူဆဲလ်) နဲ့ (နယူးယော့ခ်) မှာရှိတဲ့ (ဂျင်နယူတီ) ကျန်းမာရေး-စီမံချက်က အထက်တန်း-ဆေးပညာရှင် (ရေမွန် အဲလီဇဘက်) တို့ရဲ့ ပူးတွဲလေ့လာချက် ဖြစ်ပါတယ်။ • လေ့လာမှု ၁၂ ခုလုပ်ရာမှာ Levonorgestrel ဆေးပါတဲ့ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို သုံးစွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်း ၁၃၅ဝဝ ကို လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးမှု ၅၂ ကနေ ၁ဝဝ% ရှိတာတွေ့ရတယ်။ • Combined regimen ခေါ်တဲ့ ဆေးနှစ်မျိုးတွဲကို သုံးခဲ့သူ အမျိုးသမီးပေါင်း ၃၈ဝဝ ယောက်ကို Meta‐analysis (မီတာ-အနာလိုက်စစ်) ၈ နေရာမှာ လေ့လာတော့ ထိရောက်မှု (၅၆-၈၉%) ၇၄% ရှိတာတွေ့ရတယ်။ • ဒိနောက်မှာ ပိုသေခြာတဲ့ ဆန်းစစ်ချက်အသစ်အရ ၄၇-၅၃% ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ သိလာရတယ်။ • လေ့လာမှု ၂ ခုအရ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ ဝ့၅၁% ရှိတယ်။ Combined regimen (Yuzpe regimen) ဆေး ၂ မျိုးတွဲထက် Levonorgestrel regimen ဆေးတမျိုးထဲက ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ခြေ ထက်ဝက်နည်းတယ်။ • ဆေးပေးနည်း ၂ မျိုးလုံကို လိင်ဆက်ဆံအပြီး မြန်မြန်သောက်ရင် ထိရောက်မှု ပိုများတယ်။ • နောက်လေ့လာမှု အသေးတခုအရ အဲလို ဆေးသောက်ချိန် စောတာ၊ နောက်ကျတာက မထူးခြားတာ တွေ့ရတယ်။ • ဆေးသောက်ချိန်ဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံအပြီး ၇၂ နာရီလို့ အတိအကျသောက်စေတဲ့ Plan B, One‐Step, Next Choice စတဲ့ ဆေးမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ • နောက်လေ့လာမှုတွေအရ ဒီဆေးတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၁၂ဝ နာရီအထိ နောက်ကျသောက်တာလဲ ထိရောက်မှု အသင့်အတင့် ရှိတယ်။ • WHO trials ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရ့ လေ့လာမှု ၄ ခုအရ Levonorgestrel regimen ဆေးဟာ ၁၂ဝ နာရီအထိ နောက်ကျတာမှာ ထိရောက်မှု မကွာဘူးလို့ သိရပြန်တယ်။ • ဆေးသောက်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ Body Mass Index ကိုယ်ခန္ဓာ အရွယ်အစားကလဲ စဉ်းစားရတယ်။ • နောက် အရေးပေါ် တားနည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ထဲကို Copper-bearing IUCDs ပစ္စည်းထည့်နည်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရလမ်း ဝ့၁% သာရှိတယ်။ Ref:::::http://www.womenscenter.com/afterpill.html
Dr Tint Swe
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_contraception Labels: Sexual Education-IV, Sexual Education-X
ပိုစ့် 1972 မှ 1940 ထိ download link များ ကို မာတိကာ က link များ မှ ဒေါင်းမှသာ အဆင်ပြေပါမယ်.....
လာရောက်လည်ပတ် လေ့လာကြသော် ဧည့်သည်များ အားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း
ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း များနှင့် ပြည့်စုံ နိုင်ကြပါစေ........
Mone Tine On Android
►Addon ►ASP.NET ►Audio Editing ►AutoCAD ►Backup ►Blogger
Android Directory And Dictionary
Tutorials And Applications
Tutorials And Applications-II
►Symbian And Other
►Full Phone Specifications
►ဂျာနယ် စာစောင် တွေ
1745.. XemiCo Address Book 1.0
1744. ခရိယာန် ဘာသာဝင်များ ရဲ့ EZ Bible Search View...
1743.. ၂၀၁၁ နိုဘဲလ် ( ငြိမ်းချမ်းရေး ) ဆု ရသူများ
1742.. အစ္စလာမ် ဘာသာ များရဲ့ Quran Viewer Software ...
1741.. Internet Download Manager V6.08 + Patch
1740.. အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ​အတွက် စမတ်ဖုန်း
1739.. လိင် ဒီပလိုမာလက်မှတ်​ပေး​သည့်​ကမ္ဘာ့ ပထမ...
1737.. မြန်မာ သီချင်းဆိုဒ် နောက်တစ်ခု
1736.. ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ​ကြည့်​ရင် ဦး​နှော...
1735.. Burnaware Professional 4.1+ crack
Designed by Mone Tine.
Copyright 2011 www.monetine.net.All rights reserved. Powered by Blogger.